Kuki almọnd na ndochi chocolate | Bezzia
Kuki almọnd na ndochi chocolate
Maria onyekwere | 07/09/2021 10:00 | Postres
Onye na -adịghị achọ ịnwale ndị a kuki almọnd na ndochi chocolate? Ekwela ka ihe onyonyo ha pụọ, ịdị mfe ha adabaghị na ụtọ ịtinye ha n'ime iko mmiri ara ehi ma ọ bụ kọfị n'oge nri ụtụtụ ma ọ bụ nri. Agbanyeghị na ị nwekwara ike ime na -esoghị ya.
Kuki almond ndị a jupụtara na chocolate ha dị nnọọ mfe. Atụla egwu site na nkwụsị ụkwụ! Ọ dị mfe dị ka ịgwakọta ihe dị iche iche wee kewaa mgwakota agwa abụọ iji nweta ntọala almọnd nke kuki na ngwakọta chocolate n'etiti.
Ọ gaghị ewe gị ihe karịrị nkeji iri atọ ịkwadebe na ịkwadebe ha ụmụ ntakịrị nọ n'ụlọ nwere ike inyere gị aka. Ọ na -amasịkarị imerụ aka ha na n'ime ndị a ọ dị mkpa ime ya iji kpụọ kuki. Ị ga -anwa anwa mee ha? Ọ bụrụ na -amasị gị kuki almond, nwalee ndị a kwa na aprịkọt jam.
140 g. ntụ almọnd
50 g. Oatmeal dum
85 g. alimonde ude
60g. raw mmanụ a .ụ
35 g. mmanụ oliv na-enweghị atụ
12 g. koko dị ọcha
3 g nke yist chemical
Kpochapu oven ruo 180 Celsius na ikpo oku na ala.
Tinye ntụ ọka ma dobe ha n'otu efere.
Na efere ọzọ hichaa ihe mgbochi mmiri: akwa, mmanụ a ,ụ, mmanụ olive na ude mmiri almond.
Mgbe ah na -agụnye yist chemical n'ime ihe mgbochi mmiri ndị a. Mgbe ahụ gbakwunye ntụ ọka a gwakọtara ọnụ (idobe otu tablespoon maka oge ọzọ) na -akpali ruo mgbe ị nwetara mgwakota agwa.
Nyefee 1/3 nke mgwakota agwa na efere ọzọ ma tinye koko n'ime ya.
Na nnukwu efere ọzọ, yana nke fọdụrụ 2/3 nke mgwakota agwa, gbakwunye tablespoon ntụ ọka echekwara na ngwakọta.
Emechaa kewaa mgwakota agwa ọ bụla n'ime bọọlụ 14.
Chịkọta kuki. Iji mee nke a, were bọl nke mgwakota agwa almọnd ma tụgharịa ya. Jiri ya were nke a kechie bọọlụ koko koko.
Mgbe ahụ tinye bọl ahụ n'ime eriri mmiri tray ma dọtatụ ya ntakịrị.
Mgbe ịmechara bọọlụ niile ime maka nkeji 12 ma ọ bụ ruo mgbe ha malitere ịcha aja aja.
Mgbe nke ahụ gasị, wepụ ha na oven na hapụ ha ka ha dị jụụ n'elu eriri waya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Postres » Kuki almọnd na ndochi chocolate
Kedu ihe na -eme mgbe enwetara ihe na mmekọrịta karịa ka enyere